Na mgbede a, mụ na onye ọrụ ibe m na-apụ njem igwe kwụ otu ebe na n'etiti huffs na puffs anyị na-atụle usoro ahịa anyị maka azụmaahịa anyị. Anyị abụọ kwenyere na enweghị ịdọ aka ná ntị anyị tinyere n'ọrụ anyị na-egbochi ụlọ ọrụ anyị abụọ. Ngwaahịa sọftụwia ya na-adọta otu ụlọ ọrụ na ogo ya, yabụ na ọ marala ndị nwere atụmanya ya. Azụmaahịa m pere mpe, mana anyị lekwasịrị anya nke ukwuu na ndị ahịa kachasị mkpa nke nwere ike irite uru site na iru anyị na saịtị a yana ọkachamara anyị na ụlọ ọrụ ahụ. O di nwute, anyi abuo nwere aha edeputara nke na-achikota uzuzu.
Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị. Ndị ụlọ ọrụ na-enweghị ndị ahịa ahaziri ahazi na ndị ọrụ na-aza ajụjụ na-akwụsịkarị ahịa ruo mgbe ha chọsiri ike ire. Mkpebi ahụ nwere ike iduga ụfọdụ mmekọrịta mmekọrịta ndị ahịa na atụmanya efu n'etiti onye ahịa nọ na mkpa na ụlọ ọrụ chọrọ ego ahụ.
Mepụta edemede edemede ma nwalee okwu dị iche iche iji hụ ihe kacha emetụta. Na-ege ntị mgbe niile iji hụ na nzaghachi gị dị na mkparịta ụka.
Mụọ ọkpụkpọ oku site na ijikọ ịntanetị tupu ịme oku oyi na-anọghị n'ịntanetị ka ị wee mara nke ọma mgbe ị ruru ekwentị.